Stainless lafaka ngezithandelo, Brass selungu lokuva Amaqhosha eebhutsi, Bronze selungu lokuva imicu - JBP
Thina inkampani isebe A CO JBP IQELA (HK)., KUPHELA. Ngamava iminyaka engaphezu kwama-16 sisityebi ekwenzeni oyivileyo izalathisi phezu komhlaba kunye nezinye CNC iimveliso metal ngomshini. market yethu kukuba ndati Australia, New Zealand, eJapan, eUnited States, eJamani, France kunye namanye amazwe aseYurophu. Thina zinikwe izixhobo phambili kunye nabasebenzi bethu abaneziqinisekiso zobugcisa kuqinisekisa umgangatho wasenyangweni R & D amandla.
Izinto zonke iimveliso zethu iquka: Marine Grade steel stainless, nobhedu, ubhedu, i-aluminiyamu, izinc ingxubevange kunye irabha okusingqongileyo-friendly kunye zeplastiki.
I ngakumbi ubukho bezinto mveliso lwethu ubuxoki ngolu hlobo lulandelayo:
1, Thina amava iminyaka eli-16 'izityebi imveliso iindawo yentsimbi R eziphambili & D amandla. iimarike zethu ezona eYurophu, eMntla Melika, Australia ne Asia. Sinako ukunikeza iimveliso umgangatho ngokuhambelana nemithetho zasekuhlaleni kunye nemithetho.
2, Siye ngentsebenziswano kunye zamazwe ngamazwe eziliqela womelele iminyaka. Kukho iminyaka engaphezu kwama-20 zafumana amagcisa abayaziyo kakuhle malunga neemveliso. Ngaloo ndlela ndiyakuqinisekisa ukuba awunako ukubonelela iimveliso ezisemgangathweni ngokusekelwe kunikezelo fast na.
3, Iinjineli abafanelekayo efektri zethu cebisa nokucebisa ukuba amanye amaphulo amatsha-yenzelwe xa kuyimfuneko. Thina kakuhle ukuyila wazi kakuhle malunga nesicelo kwiimveliso zethu eziphambili.
4, Thina mvume neentengo kwamanye amazwe.
5, Kukho ezininzi ezinzile sub-oonokontraka abo zisinika ezinye izinto ezivela kwezinye izinto.
efektri yethu sise Cixi, ekupheleni ngasezantsi Hangzhou Bay Bridge, ezizezi ibhulorho elide phezu kolwandle. Kuyinto kuphela elinye kunye nesiqingatha seyure ukusuka Pudong moya kunye iyure-1 ukusuka Xiaoshan Airport, isiqingatha seyure ukusuka Ningbo moya ukuya mveliso wethu ngemoto. Ukuba ukuza kusityelela, nceda uqhagamshelane nathi ukukhuthuza up.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, kucelwa ungathandabuzi ukuqhagamshelana nathi.
TGSI-006 Stainless ephathekayo intsimbi amaqhosha ebhutsi / warni ...
iindawo irabha / iindawo yerabha exonxiweyo / udini ru ...